WhatsApp ichakubvumidza kuti usiye mapoka pasina kuzivisa vamwe vese vashandisi | Nhau dze iPhone
Ngirozi Gonzalez | 17/05/2022 17:00 | IPhone maapplication, Noticias
Mazuva mashoma apfuura takadzidza kuti WhatsApp yaive ichibatanidza mubeta vhezheni yekushandisa kwayo tsvaga ma filters. Izvi zvakatibvumira kuti tiwane zviri nyore kuwana zvatiri kutsvaga kuburikidza nenhevedzano yemaparamita. Basa idzva rakavhurwa mubeta yeWhatsApp yedesktop ndiyo mukana wekusiya mapoka eWhatsApp pasina kuzivisa vese vashandisi, vatungamiri chete. Nekusvika kweNharaunda nemapoka evanhu vanosvika mazana maviri nemakumi mashanu nevatanhatu, idanho rakanaka kudzivirira kuzivisa boka rese nezvekuenda kwemushandisi.
Tinogona kusiya maWhatsApp mapoka pasina anoona
WhatsApp mapoka anga aripo kwenguva yakareba. Panyaya inotinetsawo nhasi. Kana mushandisi afunga kusiya boka, vese vashandisi vanoona meseji inovazivisa nezvekusimuka kwavo. Muchokwadi, zvinotora hafu yenzvimbo yemeseji yakajairika uye inogara pakati pechidzitiro. Zvisinei, izvi zvinogona kuchinja nokukurumidza.
Chikwata che WABetaInfo yawana shanduko itsva ine chekuita nekusiya mumapoka. Iri basa idzva raonekwa mubeta yeWhatsApp Desktop asi ichauya kuIOS neAroid pasina kupokana kana sevhisi yekutumira mameseji ichipa girinhi mwenje kune shanduko.
Shanduko iyi inoita kuti kubuda kweboka reWhatsApp kusaonekwe kune vamwe vashandisi. Na kunze. Mabviro ese achaziviswa kune vatariri veboka. Izvi zvinogona kunge zviri mumutsara, sezvatareva, nekusvika kweNharaunda mumwedzi iri kuuya, nhevedzano yemapuratifomu apo mapoka achave ari pakati pekutarisa. Uye chokwadi ndechekuti kuenda kwevashandisi hakufanire kutora pfungwa dzemapoka sezvavanoita izvozvi kana munhu aenda.
Tichaona kana WhatsApp pakupedzisira yafunga kushandisa shanduko iyi kune yayo yese zvivakwa. Kana ukadaro, ese ari maviri iOS, Android, iyo webhu vhezheni uye iyo desktop vhezheni yaizogadziridzwa kudzivirira mameseji anogumbura ekusiiwa kweboka nevashandisi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » WhatsApp inokutendera kuti usiye mapoka pasina kuzivisa vamwe vashandisi